Jwxo-shiil oo Maanta Lagu Xidhay Magaalada Caasmara – Rasaasa News
Nov 23, 2009 Eritrea, Jwxo-shiil, ONLF
Warar hor dhac oo naga soo gaadhay caasimada dalka Eritrea, ayaa waxay sheegayaan in maanta galinkii dambe ay ciidamada madaxtooyada ee dalka Eritrea ay Jwxo-shiil, kala baxeen xafiis uu ku lahaa Caasmara, ka dibna ay xabsi dhigeen, lama oga ilaa iyo hada sida ay wax u dhaceen, wararka oo sugana waan heli doona, hadii Eebe idmo.
Sida ay wararku sheegayaan tan iyo intii uu yimid laba todobaad ka hore Jwxo-shiil, dalka Eritrrea, ayaa waxaa xafiiskiisa waardiye ka hayey ciidan Eritrea ah, meesha awal hore ay dhismaha waardiyeyn jireen ciidan uu isagu lee yahay. Eritrea ayaa waxay Jwxo-shiil, ula dhaqmi jirtay sidii wasiir Eritiyan ah, iyada oo siin jirtay mushaar fiican, xafiis uu wax ku maamulo, gaadhi iyo guri weyn oo degaan ah, oo uu dhawrkii sano ee ugu dambaysayba halkaas ku noolaa.
Jwxo-shiil, waxaa uu qabtay hogaanka ururka ONLF, sanadkii 1998, waxaana uu diiday in la qabto shir ay yeelan jirtay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], kaas oo sida qaalibka ah lagu dooran jiray ruuxa hogaaminaya ururka ONLF muddo afar sano ah. Jwxo-shiil, waxaa uu diiday in la qabto wax doorasho la yidhaahdo, arintaas oo keentay in uu khilaaf weyn hadheeyo hanaan socodka halganka ururka ONLF. Ka dibana waxaa uu ururku u kala jabay laba kooxood, waxayna koox ka mid ah labada garab ee ururka ONLF sheegtay in Jwxo-shiil, laga qaaday xilkii hogaanka ururka bilowgii sanadkii 2007, ka dibna waxaa uu dagaal ku dhexmaray gudaha dhulka Ogadeeniya labada garab ee ururka ONLF, kaas oo ay ku dhinteen madax sare oo ka tirsanaan jiray ururka.
Xukuumada Eritrea, ayaa waxay saldhig u ahayd khilaafka ururka ONLF, ka gadaal kolkii ay masuuliyiinta Jabhada qaarna hoysiisay qaarna ay damacday in ay xidho hadii ay dalkeeda yimaadaan. Xukuumada Eritrea, ayaa waxay muhimadeedu tahay in ay u isticmaasho ururka ONLf, mid ay kaga ciil baxdo xukuumada Itobiya oo ay colaad weyni ka dhaxayso.
Lama ogo waxa sababay xiligan in la xidhi Jwxo-shiil, oo ahaa nin ay aad ugu kalsoontahay xukuumada Eritrea, waxaase la ogg yahay in xukuumada Eritrea ay hore u xidh xidhay, masuuliyiin Jabhado ay hore u taageeri jirtay, ka dib kolkii ay ku eedaysay in ay ku maqan yihiin lacago badan oo ay dawladu siisay, kuwaas oo inta ay ka bixinayaan ay xabsiga ku jiri doonaan.
Si kastaba arintu ha ahaatee, dalka Eritrea oo hore u ahaan jiray xarunta Jabhadaha ku kacsan dalalka dariska la ah dalka Eritrea, ayaa xiliyadii dambe ku sii yaraanayey dalkaasi, kolkii ay Jabhaduhu ogaadeen in ayna wadin danahooda balse ay iyadu wadato dano u gaar ah. Isha ayeynu ku hayn doonaa bal sida ay wax u dhacaan iyo in cid kale lala qabtay Jwxo-shiil.
rasaaas baa runta sheegee rafiiqaaga ka yeelo